အမေရိကန်မြို့ကြီးများ tram တပ်ဆင်ထား | RayHaber | raillynews
05 / 03 / 2013 1 အမေရိကတိုက်, အမေရိကန်, လောက, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း
သငျသညျအများအပြားအခါသမယတွင်, အမေရိကန်လူများ၏ဘဝများကိုပယ်ရှားပင်နယူးယောက်နဲ့တူနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုမွို့၌နေ့တိုင်းစတင်ရန်ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ကားအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုသုံးစွဲခြင်း၏အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေဖြင့်အပြောင်းအရွေ့၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ကြောင်းကိုချိုးဖျက်မထားဘူး, ငါဆိုင်ကယ်အားဖြင့်သွားအဲဒီလူရဲ့အလုပ်အကိုင်အ xnumxmilyo ဖို့ကပြောသည်။ အဲဒီပြောင်းလဲမှုကိုတောင်မှပိုမြန်သည်ယနေ့အတွက်အသစ်တခုဖွဲ့စည်းရေးနှင့်အတူများစွာသောအရေးကြီးသောမြို့, လမ်းရထားအားဖြင့်ဗဟိုနှင့်တွေ့ဆုံ Portland နှင့် Seatle, ဝါရှင်တန်ဒီစီ, ဥက္ကလာဟိုးမား, စင်စင်နာတီအတွက်ပေါ်လာတာဟာအရင်အမှုဆောငျဖို့အစပြုနှင့် Kansas City အတွက်လမ်းရထားကွန်ယက်ကို projelendiriliy ဖြစ်ပါတယ်။ Los Angeles မှာဖြစ်ကြောင်းအရေးအပါဆုံးကတော့ရာအထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ဆန်ဖရန်ဆစ္လွမ်းဆွတ်လမ်းရထား, ဝန်ဆောင်မှု 1,3 ပြည့်စုံသောလမ်းရထား network ထဲသို့လာရန်စီစဉ်ထားသည်ထက် ကျော်လွန်. ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုလည်းသင်တန်း၏ဤပြောင်းလဲမှုအနေဖြင့်ယင်း၏ရှယ်ယာရရှိသွားတဲ့။ ဤအတောအတွင်းခြေလှမ်းများပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်မဲပေးသောသူတို့သည်ခေါ်ဆောင်သွားခံရကြသလော ရပ်ရွာ၏မဲအရေအတွက်နှင့်အတူ ...
သင်ဤစွန့်စားမှု LA ကတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား၏အကြီးဆုံးမြို့မြို့၌စတင်ဘယ်လောက်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ကြည့်ကြကုန်အံ့,
ဓါတ်ရထား, မြို့ပြအလံဘယ်လိုအလယ်ဗဟိုတွင်အခြေချရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဒီအုပ်စုသည် LA ကမြို့လမ်းရထားသက်သာရာပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သူကိုအစအဦးမှာရှေ့နေရှိသည်, သူတို့ကမေးခွန်းအဖြေကိုရှာနေသဖြင့်အလုပ်ဟုသတ်မှတ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ညီလာခံ၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူအင်အားသုံးသို့ ဝင်. နှင့်ပြည်နယ်စီမံကိန်းအားမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သောဤစီမံချက်၏ပဟေဠိအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, 1982, ကယ်လီဖိုးနီးယားများ၏သမိုင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအပေးခြင်း, ဒီဖွဲ့စည်းရေးငွေကြေးဖို့အထူးရန်ပုံငွေဖြင့်ဖုံးလွှမ်းစေမည်အကြောင်း, ဖြစ်ကောင်းသည်အခြားဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုတစ် harbinger ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတစ်ချက်မှာလမ်းရထား 21 ။ ဆင်းရဲသောရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်မြို့ကြီးများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရာစုမော်ဒယ်များ, လမ်းများ၌ပုံမှန်အသွားအလာအတွက်နေရာတစ်နေရာယူနိုငျသညျ, သငျသညျအလငျးကိုရထားလမ်းစနစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တဖြည်းဖြည်းထူးဆန်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်süregelebလေ့လာမှုများနှင့်မြို့လမ်းရထားများ၏အနာဂတ်ဆွေးနွေးမှုများ, ဘတ်စ်ကားနဲ့သူတို့ပိုပြီးနိုင်စွမ်းလွန်းန်ဆောင်မှုများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရှုမြင်ရန်အလေးချိန်ကထပ်ပြောသည်, အအခြေချအနာဂတ်အတွက်ပုံဖော်ပါလိမ့်မယ်လက်ခံခဲ့သည်။ ဒီသဘောနဲ့လက်ပံဥပမာအားအခြားမြို့များမှ, နှင့်ကျန်းမာရေးစင်တာများမှစွပ်စွဲ, မြို့လယ်ရှိမြို့လယ်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ထိုကဲ့သို့သောဆိပ်ကမ်းအဖြစ်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကရအဆောက်အအပေါင်းတို့, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးနေချိန်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုကအလင်း, ပေါ်လာတာဟာအရင်တှရေဲ့အဓိပ်ပာသည်အခြားမြို့များ Portland, ဥပမာသူတို့ကိုယ်ပိုင်အခွအေနလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အဆိုပါအမှန်တရားအားလုံးလမ်းရထားစီမံကိန်းအားတစ်ဦးချင်းစီကတခြားပျေါလှငျမွို့သားအရေးပါသောအမှတ်ရန်လွယ်ကူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရည်ရွယ်သည်။ အားလုံးနီးပါးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းများ, သေးငယ်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့မိုင်အနည်းငယ်ပစ်, Bursa ကိုလည်း T1 လိုင်းအားဖြင့်ထိုအတူမဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်သောအလင်းရထားလမ်းစနစ်ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒါတစ်ဦးစျေးပေါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူတစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုစတင်နေကြသည်, သူတို့ကအပေါ်နှစ်ကအတိုင်းအတာကိုခှဲဝေမယ့်အစီအစဉ်ကိုအတွက်မြို့ခြုံ BursaRay စီမံကိန်းကိုပန်းပုများရှိသော်လည်း, ပိုက်ဆံလက်ရှိ Kestel Navigator ကြောင်း, ဒါကြောင့်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များ ...
, La ၏အမေရိကန်မြို့မှာရှိတဲ့လမ်းရထားစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုရှေ့ဆက်လာသည့်အခါကျွမ်းကျင်သူများကအဲဒီမှာဤလျှောက်လွှာကိုများအတွက်သမိုင်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာစီမံကိန်းနှင့်ဖြည့်စွက်ကြောင်းအလေးအနက်: ကမ္ဘာ့အဖို့အကောင်းဆုံးလူကူးဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကျနော်တို့သဟဇာတကျနော်တို့ Non-မြို့အထိရောက်ဆုံးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအတွက်မည်, သူတို့ကအခိုင်အမာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဆိုပါစီးပွားရေးလောက, မြို့မှာရှိတဲ့လမ်းရထား-based သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ရပ်အကဲဖြတ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောရည်မှန်းချက်လုပ်နေတာ, စနစ်၏အဓိကရည်မှန်းချက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဟုတ်ပါဘူး, မြို့ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပြီး, စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေမခံ, သူတို့ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအခြေပြုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ရည်ရွယ်ထား ...
အမေရိကန်မြို့ကြီးများ၌ဤအဓိကဘဝအပြောင်းအလဲမော်ဒယ်များနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, ဥရောပမြို့ကြီးများရှိလူသွားလူ-လမ်းရထား-based မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်ဒယ်ပုံစံလျှောက်ထားကျနော်တို့ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကြီးများတွင်ထည့်သွင်းကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသမျှသည်အခြားသောစင်တာများ, အနိမ့်ဆုံးဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ချိ, သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ကျန်းမာမြို့နှင့်တမြို့လုံးအတွက်ကျန်းမာအသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုဖွင့်လှစ် ...
အရင်းအမြစ်: www.ekohaber.com.t ဖြစ်ပါသည်
Maxwell ရဲ့အမေရိကန် CRRC နှင့်အလုပ်လုပ်နယူးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးတရုတ်ကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးချောမွေ့စွာအတွေ့အကြုံကိုတပ်ဆင်ထား Allison လမ်းရထား
အမေရိကန်မီးရထားအသင်း - အမေရိကနှင့်ကနေဒါတွင်ရထားလမ်းကျဆင်းမှု
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၉၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်၊
ရထားလမ်း Event: အမေရိကန်ပြည်သူ့ Transit အစည်းအရုံး APTA ရထားလမ်းညီလာခံ 2013
အမေရိကန်ယာဉ်အသွားအလာဘေးကင်းလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုအသင်းနှစ်ပတ်လည်ကွန်ဂရက်နှင့်ယာဉ်အသွားအလာပြပွဲဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ မှ ၂၆ ရက်…
Block ၏ native အမေရိကန်စက်ခေါင်းထုတ်လုပ်ရေး
ကမ္ဘာ့3။ ဂရိတ်မီးရထားပြပွဲအစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ရထားထဲမှာဖွင့်လှစ်
ဂျော့ဘ်: TCDD တူရကီ2။ ch ။ dir ။ စစ်တမ်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်ယ်ယူရန်ခဲ